Hubinta waxay bixisaa siminaar ku saabsan la qabsiga waxbarashada muusikada ee loogu talagalay 'COVID' iyo 'Dante' inta lagu gudajiray NAMM 2021 | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Hubinta waxay bixisaa aqoon isweydaarsi ku saabsan la qabsiga waxbarashada muusikada ee loogu talagalay 'COVID' iyo 'Dante' inta lagu gudajiray NAMM 2021
Tababar ku saabsan Dante AV iyo Heerarka Shahaadada Dante ee 1 iyo 2 sidoo kale waa la heli karaa
Audinate wuxuu bixiyaa siminaar bilaash ah inta lagu guda jiro NAMM 2021 oo ku saabsan mowduuca "Ku Laabashada Waxbarashada Muusigga iyo Waxqabadka Xirfadlayaasha Live." Siminaarka wuxuu baarayaa sida Dante uu awood ugu siinayo noocyo badan oo kaladuwan oo toos ah iyadoo la ilaalinayo kala fogaanshaha bulshada iyo ilaalinta qolka degganaan ee dhammaan.
Sidoo kale waa la heli karaa waa aragti guud oo cusub oo ku saabsan kacdoonka Dante AV video-over-IP ee ka yimid Audinate, iyo Heerka 1 iyo 2 ee Koorsada Shahaadada Dante ee caanka ah. Taasi waxay ka dhigan tahay meel kasta oo aad adduunka ka joogto, iyo sidaad u taqaanid Dante, waxaad ka heli kartaa tababar qiimo leh iyo fikrado wax ku ool ah oo ku saabsan isticmaalka Dante ee adduunka dhabta ah, isku dhafka AV-over-IP.
Aqoon isweydaarsiga iyo tababbarku waxay si toos ah u socdaan Janaayo 18, hase yeeshe, fiidiyowga ayaa la heli doonaa iyadoo la dalbado illaa Febraayo. Diiwaangelinta dhacdooyinka ayaa hadda laga heli karaa www.audinate.com/NAMM21
Ku Laabashada Waxbarashada Muusigga Hadda
Haddii aad isku dayday inaad u isticmaasho Kulamada Zoom koox ama koox hees, waxaad ogtahay dib u dhaca (daahitaanka) nidaamka inuu aad ugu sareeyo iskaashiga muusikada. Waad awood u yeelan laheyd inaad midba midka kale u bandhigto, laakiin wadajir uma sameyn kartid. Si kastaba ha noqotee, shabakadaha Dante-ga ee hooseeya ayaa aasaas u ahaa wax soo saar toos ah muddo toban sano ah waxayna xallin karaan dhibaatada hadda.
Nagala soo qaybgal dood ku saabsan sheekooyinka dhiirrigelinta ah ee barayaasha muusigga ee dugsiga sare iyo heer jaamacadeed iyadoo la adeegsanayo Dante si loogu xidho dadka wax qabanaya ee ka kala socda goobo kala duwan. Kuwani waa sheekooyin aad ku soo koobi karto barnaamijkaaga, maanta. Talo bixin ku saabsan qorshaynta booska, isku xirka meelo fara badan si loo helo kulmiyaal buuxa oo aan ku habboonayn qol keliya, iyo xitaa siyaabo looga faa'iideysan karo shabakaddaada xarunta ayaa laga wada hadli doonaa.
Ugu dambeyntiina, waxaan soo bandhigi doonnaa sida shabakadda Dante ee aad dhisto ay ugu sii adeegi doonto adduun-musiibo kadib oo ay u noqon doonto aalad abuuraysa fursado waxbarasho oo cusub.
Soo bandhigida Dante AV - Video loogu talagalay Xalka Dante
Dante waa xalka isku xirka maqalka ee keenaya aduunka maqalka, hadana Dante AV wuxuu fiidiyoow u keenay madal. Nagala soo qaybgal cashar ku saabsan faa'iidooyinka isku dhafka Dante maqal iyo muuqaalba, isla markaana arag mudaaharaad ku saabsan xalkan cusub ee cajiibka ah!
Heerarka Tababarka Dante
Heerka Dante ee Dante 1: Dante ayaa ah xalka shabakada AV ee hogaamisa aduunka iyo heerka dhabta ah ee dhawaqa xirfadeed maanta. Fasalkani wuxuu aasaas u yahay fikradaha maqalka, fiidiyowga iyo isku xirnaanta - waxaana laga yaabaa inay tahay waxa loo baahan yahay oo dhan si loo soo ururiyo oo looga shaqeeyo nidaam yar oo Daante ah oo ku shaqeeya hal shidme oo keliya Kulankaan kadib, kaqeybgalayaashu waa inay lahaadaan xirfad ku filan oo ay ku dhammaystiraan Imtixaanka Shahaadada Dante Heerka 1.
Heerka Dante ee Dante 2: Fasalkani wuxuu ka sii socdaa fikradaha aasaasiga ah ee Dante Level Certification 1, 2021 Edition. Kaqeybgalayaashu waxay baran doonaan xirfadaha si ay u dhisaan ugana shaqeeyaan shabakadaha Dante ee dhexdhexaad-weyn-ka ah iskudhafyo badan, oo leh shabakado xad-dhaaf ah isla markaana la wadaagaan ballaadhinta adeegyada kale. Kulankaan kadib, kaqeybgalayaashu waa inay lahaadaan xirfad ku filan oo ay ku dhammaystiraan Imtixaanka Shahaadada Dante Heerka 2.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Baaritaanka, booqo Www.audinate.com
Ku saabsan Audinate Group Limited:
Shirkadda 'Audinate Group Ltd' (ASX: AD8) waxay leedahay aragti ay ku hormarinayso mustaqbalka AV. Abaalmarinta Audinate ee ku guuleysatay Dante AV ee xalinta isku xirka IP-ga waa hogaamiyaha adduunka oo dhan waxaana si weyn loogu adeegsaday codka tooska ah ee xirfadleyda, rakibaadda ganacsiga, baahinta, cinwaanka dadweynaha, iyo duubista warshadaha. Dante wuxuu badalayaa fiilooyinka analogga dhaqameedka ah isagoo sifiican uwareejinaya calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ee masaafada waawayn, meelo badan isla mar, isagoon isticmaalin wax kabadan fiilada Ethernet. Hubinta waxay xarunteedu tahay Australia waxayna xafiisyo goboleed ku leedahay Mareykanka, Ingiriiska iyo Hong Kong. Teknolojiyada Dante waxay awood u leedahay alaabooyinka laga heli karo boqolaal ka mid ah soo saareyaasha AV ee adduunka oo idil. Saamiyada caadiga ah ee shirkadda waxaa lagu kala iibsadaa (Australian Securities Exchange (ASX)) iyadoo la raacayo lambarka sumadda ee AD8.
Dante iyo Audinate waa calaamadaha ganacsi ee ka diiwaangashan Audinate Group Ltd.
Previous: Warbaahinta Streamland waxay ku dhawaaqeysaa Ujeedada ah inay ka hesho Technicolor Post Business Technicolor
Next: MTJIBS WUXUU HESHIISAY INTA AAN LAGA HELI KARI INTII AAGITO